Filipina " Journey-Assist "Izay rehetra mila alehanao." Ny loza
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Filipina
Philippines. Fampahalalana ankapobeny
Mihaona amin'i Filipina! Nosy 7000, ny morontsiraka tsara indrindra ary ny natiora tsy mampino!
Firenena hafakely i Filipina miaraka amoron-dranomasina mahafinaritra, tontolo anaty rano isan-karazany ary nosy 7. Misy sakafo mampiavaka tena tsara, maro ny toeram-pialantsasatra misy fotodrafitrasa mandroso (tsy ambany noho ny an'ny Thai) ary ny trano fanaovana tranobe. Ankoatr'izay, i Filipina dia mirehareha amin'ny toetrandro tena tsara. Misy fepetra tena tsara amin'ny fisitrihana. Ny fialan-tsasatra any Filipina dia azafady azafady amin'ny fitsangatsanganana hafahafa sy hotely tsara maro. Mahaliana ny fanombohana ny fankalazana ny Noely eto amin'ny 000 Desambra ary hifarana amin'ny 16 Janoary. Izany dia fialan-tsiny lehibe handeha hanao vakansy 6 herinandro.
Manana morontsiraka fasika fotsy be dia be i Filipina miaraka amin'ny tara-pahazavana mamirapiratra sy hazo rofia mahafinaritra. Afaka miala sasatra amin'izy ireo ianao mandritra ny taona. Na dia amin'ny vanim-potoanan'ny orana aza dia manome fampiononana ireo trano fandraisam-bahiny eto afovoan'ity firenena ity. Ho an'ireo tia amoron-dranomasina sy mpitia antsitrika dia mety indrindra ny Visayas, ary ho an'ireo izay tia traikefa nahafinaritra, ny tany efitra eny amoron-tsiraka, izay mety hananganana lay.
Ny morontsiraka Filipina dia iray amin'ireo faritra antsitrika tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Na ny mpanam-pahaizana za-draharaha indrindra aza dia afaka gaga amin'ny fahasamihafan'ny biby anaty rano hita eto. Karazana haran-dranomasina 500 mahery sy karazana trondro 2 ireo, ary koa karazana sokatra 000 ary karazan-trondro feso sy trozona mihoatra ny 6.
Ara-dalàna ny fahitana an'i Filipina. Betsaka ny valan-javaboary eto amin'ity firenena ity izay ahitanao riandrano, volkano mavitrika, biby vahiny ary zavamaniry.
Ny renivohitry ny firenena, Manila dia tena paradisa ho an'ny mpivarotra fivarotana. Eto ianao dia afaka mividy vokatra saika ny marika manerantany amin'ny vidiny ambany kokoa noho ny Eoropeana. Betsaka ny toeram-pivarotana sy fialamboly any amin'ny faritr'i Makati, izay ahafahanao mikatona mandritra ny andro maromaro. Amin'ny ankapobeny, misy ivon-toeram-pivarotana eo akaikin'ny toerana rehetra misy ny metro Manila.
Ny toetr'andro any Philippines. fizaran-taona
Filipina dia manana karazana toetr'andro tropikaly manana toetra roa: ny hafanana avo mandritra ny taona ary ny hamandoana avo. Ny vanim-potoana maina (manomboka amin'ny volana Desambra ary mifarana amin'ny volana aprily) ary ny vanim-potoana orana (Mey hatramin'ny Novambra) dia miavaka. Ny ankamaroan'ny orana dia manomboka amin'ny Jona ka hatramin'ny Oktobra. Na izany aza, any amin'ireo trano fandraisam-bahiny izay misy "ao anatin'ny nosy" dia tsy misy vanim-potoana mazava orana.
Ny vanim-potoana tsara indrindra handehanana any amin'ny ankamaroan'ny toeram-pialantsasatra ao Filipina dia ny Desambra ka hatramin'ny Mey. Indraindray kosa dia miova ny fiandohan'ny vanim-potoana orana sy ny fiafarany, ary misy fiatraikany amin'ny faritra ny cyclone samihafa. Ohatra, any atsinanan'ny firenena (atsinanan'i Mindanao, atsimon'i Leite, atsinanan'i Samara, atsimo atsinanan'i Luzon) dia matetika misy vanim-potoana mifamadika ary avy ny orana eto manomboka amin'ny Desambra ka hatramin'ny Martsa. Any amin'ny faritra sasany (Cebu manokana) "malefaka" ny andro amin'ny vanim-potoana rehetra.
Loza iray mampiavaka ny toetr'andro any Filipina ny rivo-doza. Ny ankamaroan'ny rivo-doza dia miseho amin'ny fotoam-bolana manomboka amin'ny volana Jolay ka hatramin'ny Oktobra, nefa raha ny marina dia mikapoka tsindraindray izy ireo isaky ny taona. Ny ankamaroan'ny rivo-doza rehetra dia manomboka amin'ny Janoary ka hatramin'ny aprily.
Loza ao Filipina
Firenena manana olana ara-boajanahary matetika i Filipina: rivo-doza, horohoron-tany, fipoahana volkano, tondra-drano, fihotsahan'ny tany. Na izany aza, ny ankamaroan'ny tranga toy izany dia tsy miteraka voka-dratsy ho an'ny olona. Ny olana matetika matetika ateraky ny rivodoza sy ny tafio-drivotra dia ny fanafoanana ny sidina ao amin'ny seranam-piaramanidina filipiana ary ny làlana tsy azo aleha.
Ho fisotroana dia ampiasao rano mangotraka na vidiana fotsiny ao amin'ny fivarotana. Ny fitsaboana hafanana koa dia mila ronono (raha tsy hoe, mazava ho azy, dia namboarina na nohamainina mialoha ny fividianana), vokatra vita amin'ny ronono, hena, hazan-dranomasina, trondro, legioma. Ny voankazo dia tokony hosasana sy hofihina tsara.
Amin'ny lafiny hafa, i Filipina dia azo antsoina hoe firenena somary azo antoka. Ny mponina eo an-toerana dia somary tia mandray vahiny. Ankoatr'izay, ny ankamaroan'ny Filipiana (na any amin'ny faritany) aza dia fahaizana betsaka amin'ny teny anglisy. Ampy ny fepetra fiarovana amin'ny singa (aza avela hikarakara azy ireo ny zavatrao, mijery ny paosinao any amin'ny toerana be olona).
Ankehitriny, ny toe-draharaha ara-politika eto amin'ny firenena dia mihamalalaka kokoa, nefa ny orinasam-pampihorohoroana dia mbola miasa any amin'ny faritra atsimon'i Filipina (Basilan, Sulu, Mindanao), ka tsy ilaina ny fitsidihana ireo faritra ireo.
Vola, karatra. Exchange Currency (PHP)
Ny vola nasionalin'i Filipina dia ny peso Filipina (na dia ny tena izy dia manonona ny anarany bebe kokoa hoe "piso" ny mponina ao an-toerana). Kaody iraisam-pirenena - PHP. Ny peso 1 dia zaraina ho 100 senimo amin'ny fomba ofisialy, fa raha ny tena izy, ny sentimo dia saika tsy ampiasaina intsony. Eo am-pielezana izao dia misy taratasim-bola ao amin'ny antokom-pinoana 20, 50, 100, 200, 500 ary 1 pesos ary vola madinika amin'ny antokom-pinoana 000, 1, 2 ary 5 peso.
Matetika, any amin'ny birao fifanakalozana rehefa mifanakalo vola vahiny ho an'ny peso dia manandrana mamoaka faktiora 1 pesos. Manjary olana ho an'ny mpizahatany izany satria tsy misy ny fifanakalozana fivarotana sy trano fisakafoanana. Rehefa mifanakalo dia mila mangataka faktiora kely ianao - "faktiora kely".
Amin'ny ankamaroan'ny toeram-pivarotana, dia vola ihany no ekena handoavana vola, fa any amin'ireo toerana mpizahatany any an-tsena, ny trano fisakafoanana ary ny fivarotana kely dia afaka mandray dolara amerikana izy ireo (na dia ny vidiny amin'ity tranga ity aza dia asiana vidiny sy vola). Na izany aza, ny tahan'ny amin'ny fanisana ny vidiny dia matetika tsy mahomby.
Inona ny vola tokony hoentina
Avy amin'ny vola, dolara amerikanina indrindra no tokony hoentina any Filipina, ary tsara kokoa amin'ny antokom-pinoana 100 sy 50, satria ekena amin'ny taha ambony kokoa izy ireo. Ny vola an'ny firenena USSR teo aloha teto amin'ity firenena ity dia tsy azo atakalo na aiza na aiza. Ny tahan'ny fifanakalozana ankafiziny indrindra dia any Cebu sy Manila.
Ny karatra banky dia ekena amin'ny ankamaroan'ny fivarotana, hotely ary trano fisakafoanana any Philippines. Ampy tsara ny ATM, fa ny vaomiera ambony no andoavany vola. Amin'ny ankamaroan'ny ATM, azonao atao ny misintona tsy mihoatra ny 10 pesos isaky ny fotoana, ary isaky ny raharaham-barotra tsirairay dia misy vidiny 000 pesos ankoatra ny vaomieran'ny banky izay namoaka ny karatra.
Converter - kajy. Ny dolara sy ny vola hafa any Filipina (tahan'ny peso Filipina)
Ny taham-panakalozana efa hatramin'ny farany
Fiantsenana any Philippines
Ny foibe fiantsenana sy fialamboly any Filipina dia miasa indrindra amin'ny 10 ka hatramin'ny 20. Amin'ny faran'ny herinandro, nahemotra indraindray ny fotoana famaranana. Ny tanàna lehibe hiantsenana eto amin'ity tanàna ity dia ny renivohitra Manila. Misy ivon-toerana lehibe izay amidy daholo ny zava-drehetra. Anisan'izany, tokony homarihina, ohatra, ny Mall of Asia, izay fivarotana lehibe lehibe indrindra faha-7 manerantany. 200 000 eo ho eo ny olona mitsidika azy isan'andro. Toeram-pivarotana lehibe hafa any Filipina dia Robinsons Place (trano fivarotana sy trano fisakafoanana mihoatra ny 500) ary City North EDSA (trano misy rihana 6 misy fivarotana sy trano fisakafoanana 800). Ireo ivon-toeram-pivarotana amin'ny rojo Ayala dia manome akanjo lafo vidy, kiraro ary kojakoja lafo vidy.
I Cebu koa dia toerana tsara ho an'ny mpiantsena. Ho fanampin'ny ivon-toerana fivarotana sy fialamboly "mendri-kaja" Ayala, dia misy ihany koa Robinsons Galleria mora azo. Amin'ny manodidina. Boracay dia manana City Mall tsara. Misy ivon-toeram-pivarotana sy fialamboly 5 any Angeles City - ireo dia Robinsons. City Clark, Jenra Mall, Nepo Mall, Marquee Mall.
Inona no hividy any Philippines
Entana mahaliana maro no hita ao amin'ny magazay kely sy fivarotana ary koa eny an-tsena. Manintona tokoa ny vidiny. Ny bazaar malaza indrindra ao Manila dia ny Divisoria, izay manolotra lamba isan-karazany, ary ny tsenan'i Cebu, Carbon, dia ivon-tsakafo sy fitafiana ary kojakoja anatiny.
Any Filipina, indraindray varotra, fa ny vidin'ity firenena ity dia efa ambany be. Ny varotra matetika dia mifandraika amin'ny fialantsasatra na amin'ny faran'ny vanim-potoana fizahan-tany. Tsara kokoa ny manatona ny fivarotana alohan'ny hanidiana mba tsy hahalasan'ny mpanjifa marobe.
Ny fividianana tombony dia azo atao any amin'ireo faritra seranana malalaka izay misy ny varotra malalaka. Ao amin'ny faritanin'i Batan dia misy ivon-tsenan'i Subic Bay, noforonina avy amin'ny toby miaramila taloha. Any Angeles, eo amin'ny tranokalan'ny Tafika Amerikanina taloha, varotra ara-barotra tsy misy adidy ary faritra ara-toekarena maimaimpoana miaraka amidy amina firenena vahiny maro.
Eto amin'ity firenena ity, vokatra miavaka marobe no vita, izay tsara raha hividy fanomezana na ho fampatsiahivana ny dia. Ireo entana tany am-boalohany dia noforonin'ireo mpanao asa tanana eo an-toerana avy amin'ny vatan-dranomasina. Ireto dia boaty, lovia, labozia, entana haingon-trano ho an'ny atitany. Ary koa, ny mpanao asa tanana eo an-toerana dia manao zavatra mahaliana maro avy amin'ny fitaovana toy ny abaka sy ny volotsangana. Ireo no morontsiraka, lamban-databatra, boaty, tratra. Ny firavaka any Filipina dia malaza amin'ny asa-tanany ihany koa, manao firavaka volafotsy sy perila kanto mahafinaritra. Safidy fanomezana tsara hafa dia ny fanahy ao an-toerana (vodka voanio na rum Tanduay).
Finday sy Internet any Philippines
Ireo mpandraharaha finday lehibe any Filipina dia ny Smart Communication, Sun Cellul ary Globe Telecom. Ny roaming dia misy ho an'ireo mpamandrika mpandraharaha finday avy amin'ny Federasiona Rosiana. Na izany aza, ny fandrakofana azy dia voafetra ho any Manila sy ny tanàna lehibe hafa ihany, nefa tsy mitsaha-mivelatra.
Ho fanampin'ny Internet finday, misy klioba solosaina maro eto amin'ity firenena ity. Ireo mpamatsy dia Internet Manila, Cyber ​​Space, Internet Phillipines. Ny ankamaroan'ny trano fandraisam-bahiny dia manana Wi-Fi, fa maro kosa no manana sarany miavaka amin'izany. Mandritra izany fotoana izany, ny kalitaon'ny fifandraisana dia mety ho samy hafa tanteraka - avy amin'ny tsara ka hatramin'ny miadana be, izay mahatonga ny fampiasana Internet amin'ny fomba mahazatra tsy ho vita mihitsy.
Ny karatra SIM dia amidy any amin'ny fivarotana ofisialy an'ireo mpandraharaha finday, any amin'ny tsena lehibe 7-Eleven ary eny amin'ny seranam-piaramanidina. Any Manila, ianao dia afaka mahita milina mpivarotra mivarotra karatra SIM. Tsy mila manolotra pasipaorao ianao raha amidy.
Vola - Peso Filipina (PHP)
Renivohitra - Manila